हावा सेनको इस्तानबुल एयरपोर्ट विवरण RayHaber
घरटर्कीMarmara क्षेत्र34 इस्तांबुलइस्तानबुल एयरपोर्टबाट हावा-सेनको विवरण
12 / 11 / 2019 34 इस्तांबुल, साधारण, विमानस्थलको, राजमार्ग, HEADLINE, Marmara क्षेत्र, टर्की
तपाईं बाट हवाइ istanul एयरपोर्ट विवरण
इस्तानबुल एयरपोर्टमा काम गर्ने TGS कर्मचारीहरूको नकारात्मक कामको स्थिति जारी छ। वायुसेना कर्मचारी युनियन (हवा-सेन) ले भने कि तिनीहरू अधिकृत ट्रेड युनियन नभए पनि कामदारहरूको बारेमा सोच्न सक्छन् र उनीहरूले कामका सर्त सम्बन्धी धेरै लेख सूचीबद्ध गरे।
इस्तंबुल एयरपोर्टमा टर्की ग्रुप सेवा (TGS) कर्मचारीहरूको नकारात्मक कार्य स्थिति जारी छ। एयरपोर्टबाट बसोबासहरूको दूरीका कारण, यातायातमा लाग्ने समय र सेवा घन्टाको लम्बाईले कर्मचारीहरू दुःखी बनाए, तर यस विषयमा एउटा उल्लेखनीय बयान थियो।
हामी उनीहरूको व्यवस्थापकलाई मानव र कानूनी मानहरूमा सोच्न आमन्त्रित गर्दछौं, संघले एक विज्ञप्तिमा भन्यो।
हावा सेनले गरेको व्याख्या निम्नानुसार छ:
सिभिल प्रिय नागरिक उड्डयन कर्मचारीहरू,
हामीले 26.TİS को कार्यान्वयनको अनुसरण गरेका छौं, जुन तपाईंलाई यसको तयारी र स्वीकृति प्रक्रियाको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ, हस्ताक्षर गरेपछि केही समयको लागि, यसको सबै कमजोरीहरू र गल्तीहरूको बाबजुद। TİS सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कागजात हो जसले कर्मचारीहरूको अधिकार र चासोहरूको सुरक्षा गर्दछ। आवेदन इच्छा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो एकतरफा वा गोप्य प्रोटोकल द्वारा परिमार्जन हुन सक्दैन। 26। हामीले TIS मा भाग लिएनौं र त्यसपछि हामीले प्रोटोकोल द्वारा विनियमित हुने मुद्दाहरूको स्थिति जाँच ग .्यौं। हामी तपाईंसँग परिणामहरू साझेदारी गर्न चाहान्छौं ताकि तपाईं तथ्यहरू सिक्न सक्नुहुनेछ।
1. 26, हाम्रो सबै चेतावनीको बाबजुद, नयाँ स्थानमा सर्ने चुनौतीहरूको समाधान हो। यो TIS मा कुनै पनि तरिकामा संलग्न थिएन। अब हामी देख्छौं कि दुर्भाग्यवश हामी सहि थियौं। बाहिर काम गर्न अझै ठूलो समस्याहरू छन्। सेवाहरूले कर्मचारीहरूलाई सुविधा प्रदान गर्दैन र जो आफ्नै तरिकाले काम गर्न जान्छन् उनीहरूले ठूलो कठिनाइहरूको सामना गर्दछन्।9ले एक घण्टा ओभरटाइम लिन्छ। कर्मचारीहरूले आफ्नो ख्याल आफै राख्नु पर्छ। सेवा ड्राइभरहरू एक अलग समस्या हो। काम गर्ने बाटोमा कति जना साथीहरू गुमाउने छन्, कति साथीहरू दुर्घटनामा पर्दछन् भन्ने हामी भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौं। 13-4 पटक विशाल टर्मिनल क्षेत्रमा काम गर्ने भू कर्मीहरूको दैनिक हिड्ने दूरीहरू बढ्यो। कर्मचारीको खाना र शौचालय समस्या र उडान उडान टोली कोठा, टर्मिनल क्षेत्र, प्रवेश द्वार र निकास गेटहरू र हवाइजहाज बीचको समुहको पर्याप्त समाधान हुन सकेन।
2. 26.TİS मा समाधान गरिने प्रतिबद्ध मुद्दाहरू मध्ये एक 95 हो जुन कर्तव्यका görev नियमहरू र टीमका बाँकी सदस्यहरू समावेश गर्दछ। सक्षम युनियनले हामीले बोलेको कुराहरु भन्दा बढि जान सकेन, हामीले एक आयोग स्थापना गरेका छौँ, हामी यसमा काम गर्दैछौं। HAVA-SEN को रूप मा, हामी हाम्रो मासिक SHT-FTL सेमिनारहरू जारी राख्छौं। अस्थिर टोलीहरूको काम र आराममा आयोजना गर्न आवश्यक पर्ने मुद्दाहरू पहिल्यै स्पष्ट भइसकेका छन्। 95 कर्मचारीको फाइदाको लागि SHT-FTL का फाइदा र नुकसानहरू पहिचान गरेर। सक्षम संघले लेखको प्रावधान स्थापना गर्न आवश्यक प्रयास गर्दैन। हाम्रो सबैभन्दा मौलिक अधिकारहरू, जस्तै N स्थानीय समय 03: 00 र एकै दिनमा काम पछि बन्द "," अफ-दिन günler र फेरि दिन सकिदैन, लगातार नि: शुल्क दिनहरूको अन्त्य पछि तुरून्त सुरु गर्न सकिदैन (00: 00 स्थानीय) mnemli हाम्रो अधिकार 26 मा। अवधि Tis'de समावेश छैन। यस्तो अधिग्रहण गरिएको अधिकारको ह्रास ट्रेड युनियनवादको भावनाको बिपरित हो। युनियन हार्नु हुँदैन, यो जीत गर्नुपर्छ। हामी उडान टोलीबाट लिएको अधिकारहरूको पुनर्स्थापनाको लागि कल गर्दछ प्रोटोकल मार्फत ढिलाइ नगरी जारी गर्न।
3. प्रत्येक महिना, 500-700 केबिन कर्मीहरू उडानबाट विशेषज्ञ प्रशिक्षणको नाममा लिईन्छन् र कम्पनीले उडान क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ जुन उनीहरूलाई दिइएको छैन। तर उही अवधिमा, 700 केबिन चालक दलको भर्तीको लागि घोषणा गरिएको छ। यो स्थिति, जो विरोधाभास जस्तो देखिन्छ, देखाउँदछ कि उद्देश्य जतिसक्दो चाँडो भन्दा चाँडो खर्च घटाउन, A0 कर्मचारीहरू बदल्नु, अनुभवी कर्मचारीहरूलाई हटाउनु हो। कम्पनीले मेरिटमा आधारित असाइनमेन्ट प्रणाली नभएकोले, तिनीहरूले बुझ्दैनन् कि हवाइयन रगतमा लेखिएको छ। उनीहरूलाई थाहा छैन वरिष्ठता र अनुभवको अर्थ के हो। युनियनले एक भाँडा समातेको छ। वास्तवमा, प्रयासबाट तयार गरिएको केबिन हस्ताक्षरहरूको सूची तार्किक कारणहरू होइन, तर पक्षपात र डजको गन्ध हो।
4. कम्पनीले पायलट खरीद रोकेको छ। होईन, त्यहाँ 24 MAX उडानको लागि कुनै कारण छैन, तर यो 2020 पहिलो महिना देखि उडान हुनेछ भनेर मानिन्छ। प्रशिक्षण लिन समय लाग्छ। तर हामीले पहिले नै हेरेका छौं कि विमानहरू पहिले आउँछन् र त्यसपछि टोलीहरू सेट हुन्छन्। जब पर्याप्त छैन, बाह्य पायलट लिईन्छ। थॉमस कुक, जेट एयरवेज, जर्मनी, जस्ता कम्पनीहरूले विश्व नागरिक उड्डयनमा डुबे। र्यान एयर हल्लाउँदै छ। त्यसैले त्यहाँ बजार को लागि विदेशी पायलट आपूर्ति को एक ठूलो रकम छ। यो खाली ठाउँ बन्द गर्न सजिलो छ। तर युवा टर्की पाइलटहरूलाई मौका दिने भनेको दीर्घकालीन तर्कसंगत समाधान हुनेछ। कम्तीमा पायलटहरू जो योग्यता र करारको चरणमा पुगेका थिए उनीहरूलाई मौका दिइनु पर्दछ।
अर्को मुद्दा यो हो कि यो पीडादायी छ कि एकेडेमीका स्नातकहरूको भुक्तानी एजेन्डामा ल्याइएको छैन जनसमर्थन र कार्यहरूको बाबजुद। शोषण जारी छ र सक्षम ट्रेड युनियनबाट कुनै आवाज छैन।
5. हामी 29 मे 2019 मा बनेको एक प्रेस विज्ञप्तिमा सम्झना हुनेछ, चालु लागत, नयाँ वर्ग को कठिनाइ, कम यात्रुहरु र आर्थिक कठिनाइ को संयोजन मा घटनाहरु को घटनाहरु को रूप मा, हामी या त 1500 अस्थिर फेंक, वा तलब वृद्धि कम गर्न आवश्यक उपायहरु हुनेछ। यसमा, अधिकृत युनियनले वृद्धिलाई कम गर्‍यो र यसो भन्यो कि कर्मचारीहरू यसलाई झूटा जनमत सर्वेक्षणको नतीजाको रूपमा सहमत थिए। अब हामी उही बिन्दुमा आउछौं। युनियनका एक प्रतिनिधिले भने कि उनीहरू यस मुद्दामा काम गरिरहेका थिए। हामी कहिले पनि पैसामा संलग्न भएनौं। हामीले सोचेका थियौं कि थपिएको मूल्यलाई पुरस्कृत गरिनेछ। यद्यपि युनियनलाई 'रोटी' भनेर चिनिन्छ, हामी हाकिमलाई चेतावनी दिन्छौं कि फेरि प्यारी जस्तो देखिएन। पहिलेदेखि नै सम्बन्धित भएको कमजोर भावना र विश्वास पूर्ण रूपमा हराइसकेको छ। हाम्रो कम्पनीमा फिर्ती नाफा हो ना घाटा हो। खर्च घटाउने तरिका स्टाफको तलबमा हेर्नु हुँदैन। युनियन यी त्रुटिहरू रोक्नको लागि अवस्थित छ, कर्मचारी हानी गर्ने अभ्यासहरूको लागि उपकरणको रूपमा होइन।
6. TGS साथीहरु भन्छन कि तिनीहरु धेरै दबाब र थकानको अधीनमा छन्। हामी TGS को संरचना, व्यवस्थापन र आर्थिक नीतिमा प्रश्न गर्दैनौं। जे होस्, तिनीहरूको काम तपाईंको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान छ। यद्यपि, प्रत्येक महिना सयभन्दा बढी कर्मचारी खटाइन्छन् र अरूलाई रोटीको खातिर सबै प्रकारको नकरात्मक व्यवहार गर्न बाध्य तुल्याइन्छ। कानूनको प्रावधान दुर्भाग्यवश ढल्काउँछ, जो कोही चाहानुहुन्छ भन्ने अधिकार खोज्नुहोस्, तर यसलाई "ढोका बाहिर" भनियो। यी सर्तहरू अन्तर्गत प्रदान गरिएको सेवाको गुणवत्तामाथि प्रश्न उठाउनु पर्छ। हाम्रो लागि उडानको सुरक्षा र सुरक्षा प्रत्येक व्यक्तिको प्रत्यक्ष योगदानबाट सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। 'स्विस चेस' सिद्धान्तमा तहहरू मध्ये एक TGS हो। हामी उनीहरूको ब्यवस्थापकहरूलाई मानवीय र कानूनी मानहरूमा विचार गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
प्रिय कर्मचारीहरू, यद्यपि हामी आधिकारिक युनियन होइनौं, हामी तपाईंलाई हाम्रो उपस्थितिमा सहयोग गर्न जारी राख्छौं। तथ्यहरू तपाईंको अगाडि ल्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामी तपाईंको अधिकार र तपाईंको कानून सुरक्षा गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछौं। भविष्यमा चक्रीय घटनाक्रमले हाम्रो महत्त्व र मूल्य बढाउँदछ। त्यसैले हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं मिल्दो यूनियनमा हुनुहुन्छ।
अन्टाल्या एयरपोर्टमा मेमुर सेनबाट यातायात…
इस्तांबुल एयरपोर्टले हाम्रो बजार साझेदारीमा एयर कार्गोमा वृद्धि गर्नेछ
UDEMAK-SEN अध्यक्ष पिकर TUDEMASAS को भ्रमण
हानसन देखि मेमुर-सेन सम्म 102 TL प्रेषण
ढुवानी अञ्चलबाट सेटिन अल्टुनको शुभकामना-सेन
येशू, यातायात अधिकारी सेन TCDD को महाप्रबन्धक…
DEGÜVDER टर्की ट्राफिक-सेन भ्रमण
अफसर-सेनको भ्रमणमा आर्सेननको भ्रमण
यातायात अधिकारी सेन TCDD सहायक महाप्रबन्धक…
यातायात अधिकारी सेन देखि TCDD महाप्रबन्धक Uygun '
ढुवानी अधिकारी - सेनको भ्रमण TUDEMSAS मा
इस्तानबुल यातायात र पूर्वाधार मन्त्रालय ...
हावा-सेंडेन इस्तानबुल एयरपोर्टको विवरण